Zvokuona muYucatán | Kufamba Nhau
Chii chekuona muYucatan
Mariela Carril | | Mekisiko, Chii chekuona
Mekisiko Iyo inyika inoshanya kwazvo, ine zviuru zvemakore enhoroondo uye inoshamisa nharaunda. Imwe yemahotera ayo anozivikanwa ndeye Yucatan peninsula, inzvimbo inoshamisa ine zviwanikwa uye zvekuchera matongo zvinoita kuti rwendo rwedu rukanganikwe.
Yucatan, saka, ndiyo nzvimbo yedu yekufamba nhasi.
1 Iyo Yucatan peninsula
2 Yucatan Tourism
Iyo Yucatan peninsula
Iyi peninsula inoumbwa nematunhu matatu, Yucatán pachayo, Quintana Roo neCampeche, mukati meiko Mexico, nekuti pano zvakare Belize uye chikamu cheGuatemala. Guta guru renyika yeYucatán ndiMérida.
Vasati vasvika veSpanish kunzvimbo ino yaizivikanwa nezita Mayab (kwete akawanda, zvarinoreva), uye yaive yakakosha kune iyo Mayan budiriro. Saka peninsula ndipo paive nemaguta akakosha eIzmaal, Chichen Itzá kana ano Merida, yaimbove inonzi Ichcaanzihóo.
Mushure mekupunzika kweiyi budiriro, mazhinji emaguta aya nemamwe akasiyiwa uye mamwe akapona kusvika pakasvika veSpanish, pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Nekudaro dunhu iri inzvimbo yakakosha ye nzvimbo dzokuchera matongo inoenderana nenguva dzakasiyana dzekukura kwaMayan.
Pano zvinoita kupisa kwazvo muzhizhaIsu tiri muTropic yeCancer, saka paavhareji mukati megore rose kune tembiricha ye24ºC, kunyangwe ichiputika mumwedzi yezhizha kuchamhembe kwenyika. Haisi nharaunda yemakungwa kana madziva kana nzizi, asi ndizvo ine mupfumi wepasi pemvura network uye ndosaka ikoko mumapako uye cenotes, Zviuru.
Maguta akakosha kwazvo ehurumende ndiro guta guru, Mérida, Valladolid naTicul. Guta guru rinozivikanwa seWhite City uye inzvimbo yakanyarara. VaSpanish vakaivamba muna 1542 paguta reMayan reToh, richiri kuoneka padyo nePaza Grande.
Kufamba kuburikidza Merida iwe unofanirwa kusanganisira yako historical center uye heano mamwe ezvivakwa zvaro zvakanakisa Hurumende yehurumendela Montejo Imba, all Dzimba mbiri kana the Cathedral yeSan Idelfonso. Montejo aive Adelantado anotarisira kugovera ivhu uye imba yemhuri yakapera muna 1549, mushure mekufa kwake. Unogona kuwana yekare iyi paCalle 63, na60 uye 62.
Cathedral yeSan Ildefonso ndiyo yekutanga kereke yakavakirwa muLatin America yese uye mukuru kudarika muMexico. Kuvaka kwakapedzwa muna 1598, ine materu matatu uye machechi matatu, shongwe mbiri dzeMoorish nedome rine mbiru nemaberere. Iyo yekumberi ndeye Renaissance uye iwe unoiwana iri pamberi peMain Square, iyo socket kubva kuguta.
Kune chikamu chayo kuguta re Valladolid Inozivikanwa se Sultana yekuMabvazuva. Yakave zvekare kwazvo kubvira rakaumbwa muna 1543 nezveguta reMayan reZací. Akajairika kufamba pano anosanganisira yaimbova Convent yeSan Bernardino, iyo Calzada de los Frailes, yakashongedzwa kwazvo, Chechi yeSan Servacio, iyo Agave Distillery, Municipal Palace kana Artisan Center.
Mukuwedzera kune zvetsika uye zvekuvaka zvinokwezva, muguta iro chairo mune mashoma ezviuru zve cenotes kana matsime emvura epasi pevhu muYucatán. Ndivo Zací cenote, el X'kekén, the Samula and the Suytún. Uye munzvimbo dzakatenderedza kune vamwe, iyo Cenote Xcanché uye iyo Hubik. Kune zvekare kune akati wandei akakosha ekuchera matongo nzvimbo, iyo Nzvimbo Yezvokuchera Matongo yeCobá uye iyo Ek Balam.
Uye zviri pachena, iri zvakare padyo Chichen Itza. Matongo ari munzira inoenda kuCancun, Makiromita zana nemakumi maviri kubva kuMerida. Muzuva rayo rakanakisa guta rakafukidza 25 mativi emakiromita uye raive rakakosha chitendero uye manejimendi nzvimbo, inogarwa nevakuru mune akajeka madzimba edzimba. Pakatenderedza, inofungidzirwa kuti pakati pe50 uye 60 zviuru zvevanhu vaigara, seguta remazuva ano.
Mumatongo imire kunze iyo Kukulcán Castle 30 metres kumusoro, uye pano kana iwe ukasvika pakuvira kwezuva iwe unogona kunakidzwa chero husiku hwegore iyo light and sound show. Zvimwe zvivakwa zvakakosha iSteam Bath, Musika, Tembere yeVaWarriors, Platform yeVenus, Sacred Cenote, Platform yeJaguars neChapungu, Platform yeDehenya, Bhora Court, Observatory, Imba Colorada , iyo Cenote Xtoloc ...
Kune ndege nendege pamusoro peChichen Itza, pane iyo Kukulkán Nights yandakambotaura nezvayo pamberi nekuvhara, iyo Balamkanché Grottoes, Semuyenzaniso. Chichen Itzá iriwo isiri kure nerimwe guta muYucatán, Izamal, inonzi Pueblo Mágico.
Izamal iye ane tsika nhatu, iyo pre-Puerto Rico, yekoloni uye yazvino. Ndiyo yero guta, dzakawanda, kana dzisiri dzimba dzayo dzese dzakapendwa neruvara urwu kubvira 1993, pakashanyirwa naJohn Paul II (yero ivara reVatican). MuIzamal unogona kushanyira iyo Musangano weSan Antonio de Padua, Plazuela de la Cruz, Plaza de la Constitución, iyo Artisan Cultural Center yekutenga uye iyo Mapiramidhi eIzamalEheka.
Kufamba kwakanaka muIzamal ndiko kukwira mungoro uye rega vakuendese nemumigwagwa yekoloni. Asi kunze kwemaguta aya, chii chiripo muYucatan? Huye, mahombekombe, mapurazi, convents, mapako nemapako! Ngatitangei nemabhichi: mahombekombe ehurumende ane anopfuura makiromita mazana matatu nemakumi masere nesere emvura yakadzika.
Imwe yemahombekombe anozivikanwa ndeye Progreso Gungwa, chiteshi chehurumende chekupinda. Iyo ine yakanaka boardwalk, kubva kwaunogona kuona ngarava dzinosvika, uye ine plaza, musika, maresitorendi nezvitoro. Iyi inzvimbo inozivikanwa nevanhu vemunharaunda, makiromita makumi matatu nematanhatu kubva kuMerida. Makiromita makumi mapfumbamwe kure kune imwe beach, Selemi.
Celestún ndiye nyika yepingi flamingo, zviuru zuva rega rega. Iwe unogona kukwereta chikepe uye kufamba kuburikidza mangrove uye kupisa zuva mukati mahombekombe ane coconut michindwe. Imwe nzvimbo yekuenda kunoona maflamingo uye nekristaro yakajeka mvura iri Telchac, 65 km kubva kuMerida. Kubva pano unogona kuenda kunoziva mamwe mabhishi akadai seSanta Clara, Dzilam de Bravo kana Crisanto. Telchac ndeye chiteshi chehove inoyevedza kwazvo nemabhichi machena.
Imwe saiti inonakidza ndeye Las Coloradas Gungwa, Gungwa Turtle Dziviriro Zone kubva kuma80. Kune matatu marudzi eshiri kubva pane manomwe makungwa egungwa zviri munyika. Nekudaro, hapana zvitoro kana misika, asi kune zvitoro zvinokubvisa munzira yekushandisa zuva racho.
Kutarisa Maya nyika Pamusoro peChichen Itza, inosanganisira Uxmal, Ek Balam, Mayapán, Chacmultún, Dzibilchaltún, Xcambó kana nzira yePuuc. Kana uchida cenotes uye zvinokwezva zvemumvura ipapo muYucatan zvinotevera: Cuzamá, Lol Ha, Sambula, Ik kil, iyo Sacred open-air cenote, X'keken inova nzira yemubako, Samula, Zcí, Yodzonot, Uinic, Santa Rosa, Balmi, Canunché , San Ignacio, Xcanché kana Chiquila, pakati pevamwe, imwe mhando yemapako, mimwe yakavhurwa kana yakavhurika.
Kubva panguva yekoloniyasi iyo nhaka ndiyo heneque mapurazi, yakatsaurirwa kune iyo Henequen fiber indasitiri, yatotsiviwa neyakagadzirwa. Vazhinji nhasi vanogona kushanyirwa pakushanya. Izvo zvakavakwa pakati Zana ramakore rechi XNUMX nerechi XNUMX, munguva yegoridhe girini. Haciendas anozivikanwa zvikuru ndeaya Hacienda Xcanatún, kubva muzana ramakore rechiXNUMX, nhasi hotera, iyo Kugadzira Temozón Sur, 45 km kubva kuMérida, iyo Hacienda Santa Rosa de Lima kubva muzana regumi nemasere century zvakare yakatsaurirwa kurima aloe vera kana Hacienda Yaxcopoil, pamwe nemipoparari.
Kune akawanda akawanda anovhura madhoo avo kungave sehotera kana nzendo dzezuva. Idzi haciendas zvakare nzvimbo dzakanaka dzekuyedza dzakanakisa Yucatan gastronomy, zvichibva pane nyama yeTurkey, chibage, tortilla, chili mhiripiri, bhinzi, avocado, tamales, tacos uye tudyo.
Sezvauri kuona, iyo nyika yeYucatán yakanyatso kukwana kana zvasvika pakufadza mufambi. Sanganisa hunhu, maguta echikoloni, maflamingo nema turtle, matongo eMayan, mabako, cenotes uye chikafu chinonaka. Pokutangira kazhinji Merida saka nakidzwa yako inotevera kushanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Mekisiko » Chii chekuona muYucatan
Mhuka dzesango murusununguko